Ganacsato dhaqaale siineysay TPLF oo lagu xirxiray Magaalada Jigjiga | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ganacsato dhaqaale siineysay TPLF oo lagu xirxiray Magaalada Jigjiga
Ganacsato dhaqaale siineysay TPLF oo lagu xirxiray Magaalada Jigjiga
Ciidamada amniga ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa Magaalada Jigjiga ku xirxiray 28 xubnood, oo lagu eedeeyay inay taageero maaliyadeed siinayeen Ururka TPLF ee ka dagaalama Gobolka Tigray.
“Dagaalka TPLF ay wadaan wuxuu ka dhan yahay dhammaan qowmiyadaha Itoobiya, waayo waxay rabaan inay soo celiyaan dhibaatooyinkii 27-kii sano ay dalka ku hayeen.” Ayuu yiri Taliyaha.
“Nimankan TPLF meel kasta oo dalka ah way jooggaan, oo waad ogsoon tihiin 27-kii sano ee wadanka haysteen meel kasta way ku baaheen, dhaqaalo ayayna ku sameysteen, dad-na way ku sameysteen. Sidaa darteed waxaa la’isla gartay cidda xiriirka la leh ee hantida u direysa, weliba kuwa dagaalka ku jira ee hantidooda dagaalka uga shaqaynaya in laga hortagga. Ninka dagaalka ku jira ee dalka inuu burburiyo doonaya ee hantidiisana ay halkan taalo dee waa khasab in laga hortaggo.” Ayuu yiri Taliyaha.
“Nimanka dagaalka ku jira kuwo dagaal ku jiro weeyaan, kuwa nabadgelyada ku joogga ee cidna biilin, kuwaas kuma jiraan.” Ayuu yiri jananku.
Previous articleMareykanka oo ka hadlay duqaynta cusub ee ka dhacday Galmudug
Next articleMacluumaad la xiriira gulufka militari ee Gobolada Dhexe